Sawirrada Google waxay u beddelaan tabka kaaliyaha adiga | Androidsis
Adeegga kaydinta daruuraha Google, Sawirrada Google, ayaa si joogto ah u helaya hawlo cusub si ay u sii wadaan ilaalinta xiisaha isticmaaleyaasha, maaha oo keliya Android laakiin sidoo kale iOS, halkaas oo ay ka mid tahay codsiyada ugu badan ee la soo dejiyo, dhab ahaantii. qaar ka mid ah sifooyinka cusub ayaa si degdeg ah u imanaya madal Apple.
Wararkii ugu dambeeyay ee Sawirrada Google-ka ay nasoo bandhigaan ayaa laga helay mid ka mid ah tabsiyada aan ka helno dhanka hoose ee shaashadda. Iyada oo loo marayo tab Caawiye, Google waxa ay ina siisaa albamooyin dhamaystiran oo ku salaysan dhacdooyin ama maalmo, sawiro qaabaysan, kolajyo, filimaan ... kuwaas oo ina xasuusinaya wakhtiyadii hore.
Magaca Kaaliyaha macno aad u yar ayuu samaynayaa marka loo eego waxa uu ina siinayo iyo waxa loogu talagalay yaree wareerka Google-ka waxay go'aansadeen inay magacooda ku beddelaan Waxaan ka tagay, magac aad ugu habboon waxa ay runtii na siiso. Isbeddelkan waxa uu ka imanayaa gacanta server-ka, markaa waa saacado ama maalmo in nooca Google Photos ee aad ku rakibtay aaladda aad u bedesho qaybtan, halkaas oo aan ka heli doono nooc la mid ah tan ilaa hadda. magaca Kaaliyaha.
Nooca Sawirrada Google-ka ee iOS-ka ayaa horeba u soo bandhigay magacan cusub ee qaybtanSida in version web, sidaas mar kale waxaan aragnaa sida Google u muuqataa in ay xiiso dheeraad ah in dhufto ee kale marka loo eego iyaga u gaar ah, in kasta oo tani malaha ma aha sababta dhabta ah ee sababta qaar ka mid ah hawlaha ka hor IOS in halkii Android.
Sawirrada Google-ka ayaa noo ogolaanaya inaanKu kaydi sawiro iyo muuqaalo aan xadidnayn bilaash akoonkeena Gmail-ka oo tayo sare leh, taas oo ah, ma beddeleyso feylkii asalka ahaa ee wuxuu sameeyaa beddelaad tayo sare leh iyada oo aan la dhimin xallinta wakhti kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sawirada Google ayaa magaca magaca Kaaliyaha ugu magacdarey Adiga